गरिमा विकास बैंकले मंसिर १६ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्दै, ब्याजदर कति ? « Nepal Bahas
गरिमा विकास बैंकले मंसिर १६ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्दै, ब्याजदर कति ?
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७८, बुधबार १०:५३
८ मंसिर, काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मंसिर १६ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले वार्षिक ८दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो।
बैंकले मंसिर १६ गतेदेखि ‘८ दशमलव ७५ प्रतिशत गरिमा डिबेन्चर २०८५’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो। सो ऋणपत्रको अवधि ७ वर्ष रहनेछ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा २० थान डस्टबिन सहयोग
ज्योति विकास बैंकले पनि ल्यायो प्रिपेड डलर कार्ड
लुम्बिनी विकास बैंकले थप्यो नयाँ पाँच शाखा
मुक्तिनाथ विकास बैंकको ‘सीएसआर’ बाट व्यक्तिले पाए एक लाख